TORINO: Meel lagu daawanayay finalka CL oo lagu kala cararay! (Maxaa dhacay?) – Gool FM
TORINO: Meel lagu daawanayay finalka CL oo lagu kala cararay! (Maxaa dhacay?)
Raage June 3, 2017
(Torino) 03 Juunyo 2017 – Waxaa lagu kala cararay meel ay taageerayaasha Juventus ku daawanayeen final-ka Champions League oo ku taalla Piazza San Carlo, halkaasoo ay dowladda hoose ee Torino ay dhigtay shaashad wayn.
Lama oga waxa sababay cabsida, balse waxaa la arkayay booliiska oo dadka oo kala ordaya ugu baaqayay inay is dejiyaan.
“Waxaan maqalnay qof qaylinaya, kaddibna dadkii baa waxay bilaabeen inay is riixriixaan oo ay kala cararaan.” ayay tiri Stefania, oo ah taageere Juventus oo joogtey Piazza San Carlo. “Waa fiicnahay,” ayay raacisay, “balse waxaan arkayay dad badan oo dhulka ku dhacayay.”
Real Madrid oo hanatay Champions League markii labaad oo xiriir ah kadib guul ay ka gaartay Juventus +SAWIRRO
Muxuu ka yiri Zidane ku guulaysigii Champions League ee xalay?